Pyuthan Khabar | साेसल मिडियामा सक्रिय फेक आइडीवाला अपराधीहरू कानूनकाे कठघरामा उभ्याइन्छ ! - Pyuthan Khabar साेसल मिडियामा सक्रिय फेक आइडीवाला अपराधीहरू कानूनकाे कठघरामा उभ्याइन्छ ! - Pyuthan Khabar
साेसल मिडियामा सक्रिय फेक आइडीवाला अपराधीहरू कानूनकाे कठघरामा उभ्याइन्छ !
प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन २५, आईतवार
म एकसातासम्म काेराेना संक्रमित भएर आइसाेलेसनमा रहनुप-याे । असाेज १७ देखि २३ गतेसम्मको मेराे अनुभवले काेराेना कडा अनुशासन पालना गरी लड्नुपर्ने महामारी हाे र यससँग लापरबाही गर्नु जीवनकै खेलवाड हाे । व्यक्तिगत रूपमा बितेकाे झण्डै एक बर्षकाे अत्यधिक स्ट्रेसमा काम गर्नु परेकाले हाेला, मैले झण्डै आँखाकाे दृष्टि नै गुमाएँ, धन्न समयमै समस्या थाहा पाएर उपचार गराउन संभव भयाे । महिना दिनसम्म नै भित्रपट्टि एउटा ग्लासमा टेप टाँसेर कालाे चश्मा लगाउँदै हिड्न बाध्य हुनुप-याे ।
खासमा सुगरले आँखाकाे नर्भमा हानेर डिप्लाेपियाकाे समस्या भइसकेकाे रहेछ । कान पनि कम सुन्ने समस्या भाेगें, त्यसकाे पनि उपचार गराएँ । छालाकाे एलर्जी र नङ्काे फङ्गसजस्ता समस्याहरूकाे पनि उपचार गरेर निकाे भएँ । अहिले काेराेना संक्रमण पनि मलाई नै थपियाे, यसविरुद्ध लडें र छिट्टै जितें । लकडाउनकै अवधिमा मैले अाकस्मिक रूपमा बैशाख २९ गते पित्तथैलीकाे पत्थरीकाे अपरेशन गराउनु प-याे । त्यसले गर्दा आफै पनि संक्रमणबाट जाेगिने अधिक प्रयत्नमा रहें ।
गत बर्ष पुस ७ गतेपछि सुगरकाे समस्या देखिएकाले म ढा.अंशुमाली जाेशीकाे प्रत्यक्ष सम्बन्धमा नियमित ओषधी सेवन गरिरहेकाे पनि छु । अब एउटा स्वास्थ्य समस्या सुगर मात्रै बाँकी छ, यसलाई पनि सामान्य स्थितिमा ल्याउने काेशिसमै छु । र, नियमित आैषधि सेवन गर्न बाध्य छु । मेराे परिवारमा स्वास्थ्यकर्मीहरू रहेकाे हुँदा श्रीमती, भाइ र बुहारीले अत्यधिक ध्यान मलाई संक्रमणबाट जाेगाउन नै लगाएकाे अवस्था छँदैथियाे । अस्पतालमा ड्युटीमा जाँदा वा फर्कँदा उनीहरूकाे जाेड चाहिनेभन्दा बढी सावधानी अपनाउन नै केन्द्रित हुँदै आएकाे छ। यसका पछाडि मेराे स्वास्थ्य समस्यासँगै मुख्यत: प्रधानमन्त्रीज्यूसँगकाे संवेदनशीलता र सम्बन्ध नै कारण रहेकाे थियाे ।
अहिले त् झन् काेराेनाले ठीक मान्छे छानेकाे, अब स्वस्थ भएर नफर्कियाेस्, श्रद्धाञ्जली, “रिप”अादि लेख्ने, एनिमेसन गरेर अपमानजनक प्रचार गर्ने, मानाैं तिनकाे स्वर्गकाे मुख्य बाधक नै म हुँजस्ताे गरी समाजमा गलत प्रचार र छवि निर्माण गर्न लाग्ने, मेरा स्पष्ट भनाइलाई बंग्याएर गलत अर्थ लगाई समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने, देशविदेशबाट टेलिफाेन गरी निकृष्ट गालीगलाेज गर्ने काममा नियाेजित रूपमा लागेका परिचालित तत्वहरूकाे अपराधिक कृत्यलाई पनि मैले नजिकबाट देख्न पाएँ ।
तिनकाे अभिलेख राख्ने र कानुनी कारबाहीकाे प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्ने आवश्यकता महसुस गरेकाे छु । पार्टीकै काेही नेता, गुट र पूर्ववर्ती बिरासतकाे समेत छहारीमा बसेर यस्ताे हर्कत गरिएकाे मैले महसुस गरेकाे छु । र, के स्पष्ट गर्दछु भने झिंगाकाे सरापले मात्रै गाई त मर्दैन ! कसैले मेराे मृत्युकाे कामना गरेर वा मनमनै अथवा साेसल मिडियामा मृत्युपूजा लगाएर त मैले असमयमै जीवन गुमाउनु पर्दैन । म बीचबीचमा उभिन, सबैकाे प्रिय बन्न र नाइस टु अल हुन आधा करिब शताब्दी लामाे जीवनयात्रामा कहिल्यै लागिनँ र बाँकी जीवनमा पनि कहिल्यै लाग्दिनँ । मेराे स्वभाव, शैली र निष्ठा नितान्त मेराे हाे ।
यसमा कमी त्रुटि भए हटाउन त प्रयाश गर्छु, तर अरूकाे सजिलाेका लागि म बदलिने कल्पना कसैले नगरे हुन्छ । यसदक्रममा अग्रजहरूकाे माया र आशिर्वाद चाहिँ मलाई निरन्तर प्राप्त छ भन्ने ठानेकाे छु र देशभरिका शुभेच्छुकहरूले निरन्तर साथ, सहयाेग र समर्थन गरिरहेकाे पनि मैले राम्रोसँग बुझेकाे छु ।
मैले आफ्नाे पृष्ठभूमि, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, समग्र पार्टी, साथीहरू, श्रमजीवी जनता र मातृभूमिप्रति इमान्दार भएर काम गर्छु । अहिले म प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयमा छु । यस जिम्मेवारीमा रहँदा प्रधानमन्त्रीज्यूकाे काममा सम्पूर्ण बरकतका साथ सहयाेग गर्न नैअहाेरात्र लाग्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य राम्राेसँग बुझेकाे छु। याे काममा म नयाँ छैन । त्यसैले, यसमा मेराविरूद्द कुनै ताकत, गिराेह र काेही अपराधिक मनाेवृत्तिका समूह परिचालित भएर केही तलमाथि गर्न संभव छैन ।
यश जिम्मेवारीमा रहँदा नबिराउनु र नडराउनु भन्ने मान्यता बाेकेर कार्यसम्पादन गर्ने हाे । यसाे गर्दा अनाहकमा कसैका प्रहार, घेराबन्दी, गालीगलाेज सहनुपर्छ भन्ने किमार्थ स्वीकार्य छैन । सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने प्रधानमन्त्रीज्यूकाे जीवनपद्धतिलाई मैले सकेसम्म पछ्याउने काेसिस मात्र गरिरहेकाे छु ।